मन्त्रीले नै सहिदका भाइलाई जागिरबाट निकाले ! - VOICE OF NEPAL
मन्त्रीले नै सहिदका भाइलाई जागिरबाट निकाले !
६ माघ २०७५, आईतवार २३:४५ 234 ??? ???????
–चन्द्रकाला देवी कापड
(सहिद अमित कापडका आमा, महोत्तरी)
०७४ भदौ २३ गते मेरो सर्वस्व नै हरण भएको थियो । कमाउने छोरा नै गुमाउन पुगेँ । मधेश आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको गोली लागेर छोरा अमित कापडको मृत्यु भएको थियो ।
मृत्यु भएपछि घरमा थुप्रै नेताहरु आएर अनेक आश्वासन दिनुभयो । ठूलाठूला सपना देखाउनुभयो ।
‘आन्दोलनमा सहादत दिएका परिवार तथा घाइतेहरुले अब कुनै दुःख पाउने छैन । अब मधेश सुखी सम्पन्न हुन्छ,’ उहाँहरुले भन्नुभएको थियो ।
वहाँहरुको आश्वासनपछि छोरा गुमाए पनि चित्त बुझाएको थिएँ ।
अहिले आएर ती कुराहरु सम्झँदा पीडा हुन्छ ।
मेरो परिवारले के पायो÷पाएन त्यो बेग्लै कुरा हो । किनभने मेरो छोराले परिवारको लागि मात्र सहादत दिएको होइन । देशका लागि दिएको हो । मधेशको लागि दिएको हो ।
सहिदको नाममा कोही सांसद हुनुभयो । कोही मन्त्री बन्नुभयो । तर देशले के पायो ? मधेशले के पायो ?
वास्तवमा न देशले केही पायो न मधेशले न छोराको परिवारले ।
कमसेकम मधेशले अधिकार पाएको भए हुन्थ्यो । मधेशमा विकास भएको भए हुन्थ्यो । तर त्यो पनि भएन ।
सबै आ–आफ्नो स्वार्थमा लागेका छन् । सबै लुट्नमा लागेका छन् ।
कहाँ छ मधेश ? कहाँ छन् सहिद ? कहाँ छन् आन्दोलनका घाइते ? त्यसबारे अहिले कसैलाई सोच्ने फुर्सद पनि छैन ।
अमितले सहादत दिएपछि केही दिन हाम्रो घरमा खुट्टा राख्ने ठाउँ भएन । नेताहरुको आउजाउ बाक्लियो । अनेकन आश्वासन पाइन्थे ।
कसैले ‘तपाईँ आफ्नो छोरीको विहेको लागि चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी छौँ’ नि भन्नुहुन्थ्यो । कसैले ‘तपाईँको छोरालाई मैले पढाई दिन्छौँ, पढाइको चिन्ता नलिनुस्’ भन्नुहुन्थ्यो । कसैले घर नै बनाइ दिन्छु भनेर आश्वासन दिनुहुन्थ्यो । तर ती सबै एकादेशको जस्तो लाग्छ ।
एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएर छोरीको विहे गरेको दुई वर्ष भयो अहिलेसम्म ऋण चुक्ता गर्न सकेको छैन । छोरीको नै विहे गरिदिन्छु भन्नेहरु विवाहको दिन हेर्न पनि आउनुभएन ।
जमिनको नाममा पाँचधुर मात्र छ । गुजारा गर्ने अन्य कुनै उपाय छैन । छोरा अमित गाडी चलाउँथ्यो । त्यसैले हाम्रो घरको गुजारा चल्थ्यो ।
हामी गरिब परिवारका भएका कारणले छोरा अमितलाई धेरै पढाउन पनि सकेका थिएनौं । तीन कक्षासम्म मात्र पढाउन सक्यौँ । अमितले पढाई छाडेर गाडी चलाउन सिक्यो र गाउँमै एकजनाको ट्याक्टर चलाउँथ्यो । आन्दोलनको क्रममा त्यो ट्याक्टर पनि चल्न बन्द भयो र छोरा आन्दोनलतिर लाग्यो । र, आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गयो ।
अहिले एउटा छोरा सुजितलाई वन विभागमा जागिर दिलाइएको छ । उसैको कमाईबाट गुजारा भइरहेको छ । एकजनाको कमाईले घरपरिवार धान्न निकै गाह्रो छ ।
यसअघि प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले अरु दुईटा छोरालाई जागिर लगाई दिने भनेर घरबाट बोलाएर लग्नुभएको थियो । दुईटै छोरालाई ९–९ हजार रुपियाँ तलब दिने उहाँले भन्नुभएको थियो । एकजना जलेश्वरस्थित घरमा काम गर्ने र अर्को एकजना जनकपुरमा मन्त्रीको क्वाटरमा काम गर्ने ।
केही दिन एउटै तलबमा दुवैजनालाई काम गराउनु भयो मन्त्री शर्माले । जब त्यो कुरा बाहिर आयो उहाँले एकजनालाई घर फर्काई दिनुभयो ।
सुमित मन्त्रीज्यूकै निवासमा काम गरिरहेको थियो ।
सुमितको नागरिकता थिएन । नागरिकता नहुँदा पछि जागिर खान समस्या हुने भनेर छोरा सुमित नागरिकता बनाउनका लागि घर (महोत्तरी) आयो । नागरिकता बनाउन चार दिन लाग्यो ।
चार दिनपछि नागरिकता बनाएर जाँदा राज्यमन्त्री शर्माले जागिर नदिई घर फिर्ता गरिदिनुभयो ।
शर्माको घरमा साउनदेखि काम शुरु गरेको थियो तर ६ महिना नपुग्दै पुस १५ गते छोरा अमितलाई जागिरबाट निकाल्नुभयो ।
मेरो छोरा रुँदै घर फर्केको थियो ।
मधेश सरकारले प्रत्येक सहिद परिवारका एकजनालाई जागिर दिने निर्णय नै गरेको छ । तर, जागिर दिएकालाई मन्त्रीले नै यसरी फर्काइदिएपछि हाम्रो निकै चित्त दुखेको छ ।
अब हामी फेरि जागिर माग्न कहाँ जाने ? मेरो पाँच छोरा र तीन छोरी छन् । त्यसमध्ये जेठो छोरा अमित कापडको निधन नै भइसक्यो ।
बाँकी रहेका चार छोरामध्ये सुजितलाई हिरा शर्मा भन्ने एकजना आफन्तले वन विभागमा जागिर लगाई दिनुभएको छ ।
अन्य तीनजना छोराहरु त्यतिकै घरमा बसेर दिन काटिरहेका छन् ।
तीनजना छोरीमध्ये एकजनाको मात्र विवाह भएको छ । अब दुईजनाको विवाह गर्न बाँकी छ ।
अहिलेदेखि नै छोरीको विवाहको चिन्ता लागि रहेका छ । मेरो श्रीमान पनि अपाङ्ग हुनुहुन्छ । त्यति हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्न । उहाँ घरमै बस्नु हुन्छ ।
जेठो छोराको मृत्यु भएपछि अहिले पुरै घर नै अपाङ्ग जस्तो भएको छ ।
सहयोगको नाममा सुरुमा सरकारबाट पाएको १० लाख रुपियाँ अमितको श्रीमतीले पाएकी थिइन् । त्यो घरपरिवारमा खर्च भएको छैन । अमितका बालबच्चाका लागि राखिएको छ । त्यसबाहेक अरु कुनै सहयोग कहिँ कतैबाट प्राप्त भएको छैन ।
मधेश सरकार गठन भएपछि सहिदको लागि यो गर्ने, त्यो गर्ने विभिन्न नाराहरु लगाइयो ।
चुनावको समयमा नेताहरुले विभिन्न आश्वासनहरु बाँड्ने काम भयो तर अहिलेसम्म सहिदको नाममा केही भएको छैन । हामीलाई निकै दुःख लागेको छ । – रातोपाटी
श्रीमानको पनि मृगौला फेल भएर मृत्युको पीडा खेपेकी आमाले छोराको दुवै मृगौला फेल भएपछि जीवन बचाइन दिन आग्रह
श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन,आषाढ ३० गते सोमबार\_ जुलाई १५ तारिखको राशिफल
नेपाली नारी समाज पोर्चुगलले समर भ्रमण लैजाने
माता दक्षिणकालीले सबैको कल्याण गरुन,आषाढ २९ गते आइतबार\_ जुलाई १४ तारिखको राशिफल
टिभी अन्नपूर्णका लागी पत्रकार /कर्मचारी आवश्यकता
श्री मनकामना माताले सबैको कल्याण गरुन,आषाढ २८ गते शनिबार\_ जुलाई १३ तारिखको राशिफल